Ukubukwa, okuvelayo, ukuchofozwa… Ngicabanga ukuthi kungani sisalinganisa futhi sikhangise ngokususelwa kulawo ma-metric. IMassiveImpact yinethiwekhi yesikhangiso ephathekayo efinyelela ngaphezu kwabasebenzisi be-inthanethi abangaphezu kwezigidigidi ezi-1 abavela emazweni ayi-190 futhi abakwenzi. Basebenzisa i-CPA, noma izindleko ngesenzo ngasinye, ukuthola amanani abo ezikhangiso. Kulungile… ukhokha kuphela uma kunokuguqulwa kwangempela! Lokhu kusho ukuthi ukubuyiselwa kwakho ekutshalweni kuqinisekisiwe. IMassiveImpact inikeza imodeli yokukhangisa ephathekayo eyi-2, isebenzisa